Tokony Hanao Tatoazy ve Aho? | Manontany ny Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bambara Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Galoà Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kazakh (Arabo) Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Guinée-Bissau Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Nzema Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tetun Dili Tiorka Tiv Tseky Tsonga Télougou Vietnamianina Wolof Xhosa Yorobà Éwé
Nahoana no be mpitia ny tatoazy?
Inona ny fanontaniana tsara eritreretinao?
Inona ny toro lalan’ny Baiboly azonao ampiharina?
“Hoatran’ny zavakanto ny tatoazy sasany”, hoy ny tovolahy atao hoe Ryan.
Mety ho te hanisy tatoazy eo amin’ny vatanao ianao rehefa hitanao hoe tsara ny antony anaovana an’ilay izy. Hoy i Jillian: “Mbola kely ilay ankizivavy mpiara-mianatra tamiko dia efa maty ny mamany. Nataony tatoazy tao amin’ny hatony àry ny anaran’ny mamany rehefa lehibebe izy. Hitako hoe tsara ny tatoazy hoatr’izany.”
Mila mieritreritra tsara aloha ianao vao manapa-kevitra ny hanao tatoazy, na inona na inona antony anaovanao an’ilay izy. Mety tsy ho afaka intsony mantsy ireny. Inona àry ny fanontaniana tsara eritreretinao alohan’ny hanaovanao tatoazy? Inona ny toro lalan’ny Baiboly hanampy anao hahay hanapa-kevitra?
Mety hiteraka aretina ve ny tatoazy? Nilaza ny Hopitaly Mayo hoe: “Tsindrotsindronina ny hoditra rehefa manao tatoazy. Mety hisy mikraoba tafiditra àry ao anaty hoditra, na koa mety hisy vokany hafa. Misy mandrotsirotsy indraindray eo amin’ilay tatoazy, na mety hivonto be ny holatra eo amin’ilay izy.” Noresahin’ilay hopitaly koa hoe: “Mety hisy otrikaretina avy amin’ny ra ny fitaovana anaovana tatoazy raha tsy voadio tsara, ary mety hifindra ao aminao izany.”
Mety hahatonga anao ho ratsy laza ve ny tatoazy? Na tianao na tsy tianao, dia ny paozinao no ahitan’ny olona hoe efa olon-dehibe ianao na mbola tsy matotra, mendri-pitokisana na tsy azo ianteherana. Hoy ny tovovavy atao hoe Samantha: “Vao mahita olona misy tatoazy aho, tonga dia mieritreritra hoe olona mpisotrosotro sy tia manala azy iny.”
Hoy kosa i Melanie, 18 taona: “Lasa takona ny hatsaran’ilay olona rehefa manao tatoazy izy. Hoatran’ny hoe tsy tiany ho hitan’ny olona ny tena maha izy azy, dia aleony manao tatoazy.”
Ho tianao foana ve ilay izy? Mety hitatra ny tatoazy sady hiharatsy ny paoziny rehefa mihangeza ny olona iray na mandroso taona. Hoy ny tovolahy atao hoe Joseph: “Tsy tsara intsony ny tatoazy, am-polony taona atỳ aoriana.”
Hoy i Allen, 21 taona: “Matetika no tsy lamaody intsony ny tatoazy, rehefa mandeha ny fotoana. Na dia tena tian’ilay olona aza ilay izy, dia mety tsy ho zava-dehibe aminy intsony rehefa afaka taona vitsivitsy.”
Marina ny tenin’i Allen. Miova mantsy ny fomba fijerin’ny olona sy ny zavatra tiany rehefa mihalehibe izy, fa ilay tatoazy kosa tsy miova. Hoy ny tovovavy atao hoe Teresa: “Aleoko tsy manao tatoazy satria fantatro hoe hanenina aho any aoriana any fa nanao hadalana.”
Matotra ny olona iray raha mamakafaka tsara aloha vao manapa-kevitra. (Ohabolana 21:5; Hebreo 5:14) Saintsaino àry ireto toro lalan’ny Baiboly ireto:
Kolosianina 3:20: “Ianareo zanaka, ankatoavy amin’ny zava-drehetra ny ray aman-dreninareo, fa ankasitrahana eo anatrehan’ny Tompo izany.”
Inona no mety ho vokany raha mbola miara-mipetraka amin’ny ray aman-dreninao ianao nefa tsy manaraka ny teniny?
1 Petera 3:3, 4: “Aoka ny haingonareo tsy ho zavatra ivelany toy ny firandranam-bolo sy ny fanaovana firava-bolamena na akanjo ivelany, fa aoka kosa ho ilay toetra miafina ao am-po, izay toy ny manao fitafiana tsy mety simba, dia ny toetra tony sy malemy paika.”
Nahoana ny Baiboly no milaza fa zava-dehibe ny “toetra miafina ao am-po”?
1 Timoty 2:9: “Iriko koa ny vehivavy mba hihaingo ... amin’ny fomba maotina sy amim-pahendrena.”
Inona no dikan’ny hoe “maotina”? Nahoana no mahafinaritra kokoa noho ny olona misy tatoazy ny olona maotina, rehefa mandeha ny fotoana?
Romanina 12:1: ‘Atolory ny tenanareo ho sorona velona sy masina ary ankasitrahan’Andriamanitra. Izany dia fanompoana masina ampiasanareo ny sainareo.’
Nahoana no zava-dehibe amin’Andriamanitra izay ataonao amin’ny vatanao?
Maro àry no nanapa-kevitra fa tsy hanao tatoazy. Nahita zavatra mahasoa kokoa mantsy izy ireo. Hoy i Teresa, ilay voaresaka tetsy aloha: “Raha misy tenin’olona na teny filamatra tena ankafizinao, dia ampiharo eo amin’ny fiainanao ilay izy. Raha misy olona mamin’ny fonao, dia lazao aminy hoe tena tianao izy. Tsara kokoa raha ampiharinao eo amin’ny fiainanao izay inoanao, toy izay hatao tatoazy.”
Diniho Tsara Aloha sao dia Tsy Mahasoa!
Hizara Hizara Tokony Hanao Tatoazy ve Aho?
ijwyp no. 52
Inona no Lazain’ny Baiboly Momba ny Tatoazy?